Ahụhụ Wireworm: Chọpụta, Gbochie, ma Jikwaa Ahụhụ Ndị A - Ogige Pests
Ahụhụ Wireworm: Chọpụta, Gbochie, ma Jikwaa Ahụhụ Ndị A
Ndụ okirikiri nke Wireworms
Ezigbo ebe obibi
Gịnị Ka Ha Na-eri?
Etu esi ewepu ahihia
Ogologo ndụ, agụụ na-agụ wireworm nwere ike imebisị ihe gbasara ọrụ ugbo. Site na nhọrọ dịgasị iche iche nke ihe ọkụkụ dị iche iche dị ka ebumnuche ha, ndị a pịa ebe larvae na-achọ ma na-ata site na mgbọrọgwụ nke ahịhịa.
A na-ahụkarị ahụhụ ndị a siri ike igbu. Ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ anaghị adị ka ha nwere ọtụtụ mmetụta.
Ekwela ka nke a menye gi ụjọ, ma! Taa anyị na-amụta ihe wireworm bụ. Anyị ga-agabigakwa ụdị okenye, pịa ebe. Ma ọ bụ ezie na ọ ga-ewe ụfọdụ ọrụ iji kpochapụ ụmụ ahụhụ ndị a, m ga-enye gị ndepụta nke nhọrọ ga-enyere gị aka ihichapụ ha.
Ngwaahịa m kachasị elu iji kpochapụ Wireworms:
Branddị Yard Nchekwa & Ogige Gardengba
EcoSMART Organic ahụhụ Na-egbu Granules
Nematodes bara uru
Yard Butler TNT-4 Ogige Ntughari Na Tiller
Aha (s) Wireworm, pịa ebe, elaters, enwe snapping, mmiri enwe, skipjacks, nduku ikpuru
Aha (s) sayensị Otutu umu na ezinụlọ Elateridae
Mbido N’ụwa nile, ọ kachasị n’ubi ndị na-akọ ihe ọkụkụ
Osisi Emetụta Ihe ndi oru ubi na ahihia. A na-emetụta ọka, ọka wit na ọka ndị ọzọ na mgbakwunye brassicas, mgbọrọgwụ kụrụ dị ka karọt, poteto, beets na poteto ụtọ, na-arịgo osisi dị ka agwa na cowpeas, ahịhịa dị ka melon, na ụdị ndị ọzọ dị ka yabasị, letus, na strọberị.
Remgwọ Ọgwụ Ngwurugwu Pyrethrin, ụmụ ahụhụ na-egbu ụmụ ahụhụ, ntụgharị ihe ọkụkụ, na-eme ka larvae ahụ dị n'elu ala, na-amata, na-eji nematodes bara uru iji nyere aka ịchịkwa pests ala.
Gulf Wireworm dị ka okenye pịa ebe.
Okenye ogbo a pesti a na-akpọ pịa ebe. Pịa ebe bụ aha nke na-ezo aka na ịpị ụda ndị okenye na-eme mgbe ha na-akụda ụda ha. Akwukwo a bu uzo bu uzo nke ndu uzo ndu nke nwere ike ihu mgbe nile n’elu ala. Lelee anya maka ihe ndị a!
Pịa enwe dina ha nsen ozugbo na ala. Akwa ndị a pere mpe ma na-acha ọcha, dị okirikiri, ma na-etinyekarị ha n'akụkụ ahịhịa ma ọ bụ mgbọrọgwụ akuku. Mgbe ha na-apụta, larvae ahụ na-apụta, nke bụ ihe anyị na-akpọ wireworms. Larvae coloration na-abụkarị odo na nwa.
Pịa ebe na ndụ ya niile.
Ihe dịka 1 / 16th nke anụ ọhịa buru ibu, larvae ọhụrụ a kụrụ ọhụrụ ga-eto eto iru nha nke 3/4 ″ n'ogologo tupu pupation. Usoro a nwere ike iburu afọ 2-3, dịka wireworms anaghị adị ngwa ịzụlite. Ọ bụ ezie na ha anaghị emebi emebi osisi na afọ mbụ ha, larvae ndị okenye nwere ike iripịa mgbọrọgwụ nke ahịhịa, na-akpata wilting na osisi ọnwụ.
Akpụkpọ ụkwụ a na - etolite na njedebe nke oge nke afọ 2-3 na - acha ọcha ma dịkwa nro. Ndị a na-emebi ngwa ngwa site na ihe ọ bụla nwere ike igwu n'ime ala. Mgbe ọkwa nwata ahụ gwụchara, okenye pịa ebe ahụ ga-egwughachi ala ma bidoghachi usoro ndụ.
Dika wireworms na-emefu ahihia ha dum n'ime ala, enwere ike ichota ha, gburugburu, ma obu di nso na mgbọrọgwụ osisi. Okenye pịa enwe ndo ke akwukwo-awụba n'oké osimiri ma ọ bụ ndị ọzọ na osisi irighiri ihe. Ha họọrọ ịnọ nso ebe nri ha si.
E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche, ụfọdụ aha ha bụ maka gburugburu ebe ha bikarị.
Iji maa atụ, Oké Osimiri Pasifik wireworm ( IJmonius nká ) bụ ihe a na-ahụkarị na mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke US. Ala akọrọ wireworm ( Ctenicera pruinina ) bụ ihe a na-ahụkarị na mpaghara mgbago ugwu ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke US, ọkachasị na mbara ọzara.
E nwere ụdị ahụhụ a na-akpasu iwe na ụwa niile. Dika ahịhịa a na-eri nri na-eri nri na mgbọrọgwụ nke ahịhịa ma ọ bụ akụ tuber, a ga-ahụ ha ebe ọ bụla ebe akụ ndị a toro. Ha dịkwa na ahịhịa ebe ahịhịa ọhịa na-enye nri.
Wireworm na ala.
Ọ bụ ezie na e nwere ụdị nke na-eri oriri na mkpụrụ osisi ụfọdụ, dị ka sugarbeet wireworm ( California IJmonius ), ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-eri mgbọrọgwụ nke ahịhịa ọka na mgbọrọgwụ kụrụ dị ka karọt, poteto, ma ọ bụ biiti. E nwere ọbụna ụdị dịgasị iche iche a na-akpọ dị ka ikpuru nduku n'ihi na ọ na-agwụ nnukwu oghere na mgbọrọgwụ tubrous.
Agbanyeghị, enwere ike ịhụ ha ka ha na-eri mgbọrọgwụ brassicas, melon, poteto ụtọ, agwa, letus, ọka, yabasị, peas, na strawberries. Fọdụ ahịhịa ọhịa na-amị mkpụrụ, dị ka ryegrass, nwekwara ike ịbụ nri ụmụ ahụhụ ndị a.
Mana gịnị ka ụmụ beetị na-eri? Ndị okenye na-erikarị okirikiri na ifuru site na ifuru. Mgbe ụfọdụ, ha ga-anụ nri n’onwe ha. Varietiesdị ole na ole ga-eri obere ụmụ ahụhụ dị nro dịka aphids.
Common pịa enwe.
Dịka m kwuru na mbụ, ọ nwere ike ịbụ ihe siri ike iji kpochapụ ụmụ okorobịa a. Nke a nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ọchịchọ nnabata ala ha. O siri ike ịchọta ikpuru ihe ọkụkụ nke ị na-apụghị ịhụ!
Enwere ụfọdụ ihe ị ga - eme iji belata ọnụ ọgụgụ ha ma jiri nwayọ wepu ha n’ala gị. Ka anyị gafere ndị ahụ ugbu a!
Pịa enwe, dị ka ọtụtụ enwe ndị ọzọ, nwere ike ịbelata sprays na-adabere na pyrethrin . Ọ bụrụ na ị hụrụ pịa enwe na gburugburu ubi gị, jiri ihe ịgba dị ka PyGanic ma ọ bụ Branddị Yard Nchekwa & Ogige Gardengba . Nke a kwesịrị ilekọta enwe na elu.
Ọ bụrụ na waya ikpuru aghọwo nsogbu na gị akwa ma ọ bụ akwa ifuru , i nwere ike iji EcoSMART Organic ahụhụ Na-egbu Granules . Nwa na enyi na enyi, granulu a ga - enyere aka belata onu ogugu otutu umu ahụhụ. Ebumnuche ndị a abụghị maka ojiji ubi a na-eri eri, ọ bụ ezie na ha agaghị emerụ osisi gị. Maka ahịhịa ma ọ bụ okooko osisi, ha na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eji PyGanic ike a Pyrethrin na-egwu ala maka ala igbu larvae, ị kwesịrị ịkpachara anya na-eme otú ahụ. Nke a nwere ike ịba uru dị oke egwu iji belata ọnụ ọgụgụ larvae. Agbanyeghị, ọ nwere ike imerụ ndị ọzọ bi na ala bụ ndị bara uru na ogige ahụ. Ekwesiri ime nke a dika ihe ikpeazu n'oge oria ojoo.
Enwere m mmasị itinye aka bara uru ụmụ ahụhụ n'ime ogige m, ebe ha na-elekọta ọtụtụ pests. Otu n'ime ihe nchebe kachasị mma bụ ịmebata nematodes bara uru n'ime ala gị. Umu ahihia ndia agha agha ma rie ahihia nke umu ha. Ha na enyere aka na otutu pests ndi ozo!
Tinye ọnyà n'ime ala ịrata larvae. Enwere m mmasị karịsịa usoro ọnyà ọnya e gbanwere na vidiyo dị n'okpuru. I nwekwara ike iji nnukwu poteto nke ejiri ya mee ihe site na ya dika nduku nri idide. Soro ntuziaka na vidiyo a iji hụ ka o si arụ ọrụ! Ọ bụrụ na ịchọta ọtụtụ ikpuru, mgbe ahụ ọ bụ oge ịkwaga na nhọrọ nchịkwa dị oke njọ.
Na-akọ ubi gị ! Site na ịkọ ala gị, ị na-ebute larvae niile n'elu, ma na-arụ ọrụ ma pupating. Nke a na - eme ka ha bụrụ ndị na - aga agha maka nnụnnụ Ọ na-emekwa ka ala a ghara ile ọbịa nke ọma ka ihe ọkụkụ ghara ịmị mkpụrụ. Ekwadoro m ka ị jiri ngwaahịa dịka Yard Butler TNT-4 Ogige Ntughari Na Tiller . Igwe a na-ejikwa ogologo oge na-enyere gị aka ịbanye n'ime ala ala. Enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka aka tillers ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ ihe ọzọ!
Mee mmeghari ihe ubi. Ọ dị mkpa ịmegharị ihe ọkụkụ gị. Idebe ha n’otu ebe n’afọ n’afọ na-emepụta ebe dị mma maka pests ahụ ọkụkụ na-abanye. Ọ bụrụ na ị gbanwee ọnọdụ nke ụdị ihe ọkụkụ gị kwa afọ, ịnwere ike ịgbanwe ụdị pesti ụfọdụ n'ịnọgide.
Ajụjụ: Enwere m ụfọdụ poteto nwere oghere wireworm. A ka na-eri ha eri?
Kedu ihe fatịlaịza kacha mma iji mee ihe na tomato?
Azịza: ha nwere ike iri nri. Nyochaa nduku nke ọma. Ọ bụrụ na naanị mmebi bụ oghere orednọ nkịtị gwụrụ site tuber, na e nweghị ndị na-ahụ anya ihe ịrịba ama nke ire ere, ị pụrụ nanị bechapụ ọ bụla mebiri emebi agba na esi nri nke fọdụrụ nduku.
Ọ bụrụ na enwere ihe ịrịba ama nke ịda nro ma ọ bụ ire ere gburugburu oghere ahụ, m ga-atụfu nduku ahụ. Anaghị m adụ ọdụ na-anwa ịchekwa nduku na mmebi wireworm, n'otu ụzọ ahụ m ga-adụ ọdụ ka ịchekwa nduku na akụkụ gouged ma ọ bụ mmebi mpụga ndị ọzọ.
Ajụjụ: Enwere m ike compost osisi nwere mgbọrọgwụ nke wireworms mebiri?
A: Ọfọn, ịnwere ike, mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya ịgbakọ mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na àkwá ka dị na mgbọrọgwụ n'onwe ha, ị nwere ike ịmepụta ebe dị mma na-ekpo ọkụ ebe akwa ndị ahụ nwere ike ịmịkọrọ anụ na-etinye nri gị. Ọ ka mma ikpofu kpamkpam nke ihe ndị jupụtara na ya mgbe enwere ike. Otu ihe ahụ metụtara osisi ọ bụla nke na-egosi ihe ịrịba ama nke ọrịa ma ọ bụ ọrịa na-akpata ọrịa.
4 na-acha ọkụ ọkụ na-eto eto
esi tufuo ọcha chinchi na osisi
gịnị mere m tomato kewara na osisi vaịn
ole ohere maka osisi tomato